ဆရာငွိမျး၏ 22. July. 21 မှ 28. July. 21 အထိ တဈပတျစာ ၇ ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး
HomeKnowledgeဆရာငွိမျး၏ 22. July. 21 မှ 28. July. 21 အထိ တဈပတျစာ ၇ ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး
22. July .2021 မှ 28. July. 2021 အထိ တဈပတျစာ ၇ ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး
ဒီကာလအတှငျးမှာတော့ အနညျးငယျ စိတျပူပငျစရာလေးတှေ ရှိပါတယျ။ ကွီးကွီးမားမား ကိစ်စတှဘောမှ ကွံစညျ၊ စိတျကူး၊ လုပျကိုငျလို့ မရသေးပါဘူး။ လူငယျမြားမိဘတှနေဲ့ အတိုကျအခံ မလုပျမိပါစနေဲ့။ ကိုယျ့ကိစ်စထကျ သူတဈပါးရဲ့ကိစ်စတှေ ပိုပွီးရှုတျထှေး နရေတတျပါသညျ။ အပူလောငျတာ၊ ဓါတျလိုကျတာ၊ အဖိုးတနျပစ်စညျးတှေ ပကျြစီးဆုံးရှုံးတာ သူခိုးအခိုးခံရတာတှေ ကွုံတှရေ့တတျပါသညျ။ ပစ်စညျးအဝယျအရောငျး ကိစ်စတဈခု လှဲခြျောသှား တတျပါသညျ။
မိတျဆှရေငျး၊ လူရငျးမြားထဲက နာရေးကိစ်စမြားအထိ ကွုံတှနေ့ရေ တတျပါသညျ။ ကတိပေးမှားတာ၊ စာခြုပျမှားနတောတှေ ဖွဈစရေတတျပါသညျ။ အမှနျတော့ ဒီကာလအတှငျးမှာ ပုံမှနျအတိုငျးသာ လညျပတျ လုပျကိုငျပါ။ အသဈတဈခုခု စတာမြိုးတှေ၊ အပွောငျးအလဲလုပျတာမြိုးတှကေ သခေငျြတဲ့ကြား တော ပွောငျး ဖွဈရတတျ ပါတယျ။ အှနျလိုငျးက ပစ်စညျးမှာတာမြိုးတှေ၊ ရပျဝေးကို ပစ်စညျးပို့တဲ့ကိစ်စမြိုးတှမှော လမျးခရီးမှာ ပစ်စညျးဆုံးရှုံးပကျြစီး တာမြိုးတှေ ဖွဈရတတျပါတယျ။
အခဈြခရီးလမျး ဖွောငျ့ဖွူးတတျပါတယျ။ ခဈြသူနဲ့အခကျအခဲ တှကေို အတူတူ ရငျဆိုငျပါ။ အိမျထောငျရေးမှာတော့ အိမျထောငျဘကျက ဝငျငှတေိုးတာမြိုး၊ စီးပှားအဆငျပွတောမြိုး ကွုံရအတှကျ စိတျခမျြးသာရတတျပါတယျ။ ပညာရေးအတှကျ ဆရာကောငျးတှနေဲ့ မခြိတျဆကျမိသလို ဖွဈနရေ တတျပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး 2/ 1/ 4
အထူးဟော - ကံအားနညျးနပေါလိမျ့မယျ။
ယတွာ - ရခှေကျတဈခှကျ ရဟနျးတဈပါးကို လှူပေးပါ
ကံကွမ်မာက ဒီအပတျထဲ အကောငျးအဆိုးမြှနတော တှရေ့တယျ။ ဘယျအရာမှ အဆိုးဆုံးမဖွဈသလို၊ ဘယျ အရာမှလဲ ထှနျးထှနျးပေါကျပေါကျ မဖွဈခြိနျပါပဲ။ အမှုအခငျး ပွဿနာမြား ရငျဆိုငျဖွရှေငျးရမညျ။ အလုပျအကိုငျ ကိစ်စရပျမြားကို အကွောငျးပွု၍ ရုံးရောကျ၊ ဂါတျရောကျကွုံနိုငျသညျ။ အနောကျတောငျအရပျသို့ ခရီးသှားစဉျ အန်တရာယျ ကွုံနိုငျသညျ။ မကျြစိတှငျ မတျောတဆ ထိခိုကျမှု သတိရှိပါ။
အမြိုးသားမြား အသှားအလာ၊ အနအေထိုငျ မဆငျခွငျက လိငျကိစ်စ ဖွရှေငျးရခွငျး၊ စှပျစှဲခံရခွငျးမြား ကွုံနိုငျသညျ။ ကနျြးမာရေးကောငျးပမေဲ့ ဆေးထိုး၊ ဆေး သောကျမှားယှငျး ခွငျး ဂရုစိုကျရမညျ။ ရောငျးဝယျခှငျ့မပွုသော ဆေးဝါးတို့ကို လကျဝယျမထားရှိရ။ အန်တရာယျကွီးမားလိမျ့မညျ။ ငှနေောကျမလိုကျဖို့ အထူးမှာခငျြပါ တယျ။ ငှကွေေး အလငျြလိုနလေို့ လောငျးကစားမှာ ရငျးနှီးမွုပျနှံလိုကျတာက အရှုံးမြားသှားနိုငျပါတယျ။
သူမြားတှကေ ငါ့အလုပျကို ခဏအစား ထိုးလုပျပေးပါဆိုရငျ သတိထားပါ။ ပွဿနာက အဲဒါက စပါလိမျ့မယျ။ တဈခွားသူမြား မှားနရေငျတောငျမှ မိမိက ပုံကွီးခြဲ့ပွီး ပွဿနာ မရှာလိုကျပါနဲ့။ အဖွပေဲရှာ ပေး လိုကျပါ။ အသားအရနေဲ့ ပတျသကျပွီး ထိနျးသိမျးတတျဖို့ လိုပါတယျ။ ဝကျခွံပုနျးတှေ ထှကျလာတတျပါတယျ။ အခဈြရေးကံ မကောငျးသေးတဲ့ ကာလပါပဲ။ အိမျထောငျရေးကတော့ လကျတှဲညီညီနဲ့ ရှဆေ့ကျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးမှာတော့ စာတှကေို အပျေါယံလောကျပဲ နားလညျမဲ့ ကာလပါပဲ။
အကြိုးပေးဂဏနျး 1/ 4/ 7
ယတွာ - ကျောရညျခေါကျဆှဲ ဘုရားကပျလှူလိုကျပါ။
ရပျတနျ့ထားသော ပညာရေးကိစ်စမြား ဆောငျရှကျနိုငျမညျ။ ဆိုငျးငံ့ထားသောခရီးကိစ်စ အဆငျပွမေညျ။ လူမြိုးကှဲ အကြိုး ပေးမညျ။ အရပျဝေးနှငျ့ ဆကျစပျသောအလုပျမှ ထူးခွားသော အကြိုးရရှိမညျ။ လကျကားစီးပှားရေး အလုပျမြား အမွတျအစှနျးကောငျး ရရှိမညျ။ မွောကျအရပျသို့ ခရီးသှားစဉျ ကောငျးသောအကြိုးပျေါထှနျးမညျ။ အိမျအသဈဆောကျ ခွငျးမြား ဆောငျရှကျနိုငျသညျ။ အိမျအပွောငျးအရှမြေ့ား ဆောငျရှကျနိုငျသညျ။ နရောထိုငျခငျး ကိစ်စမြား ပွောဆိုဆောငျ ရှကျ အောငျမွငျမညျ။
အကွံအစညျ၊ ရညျရှယျခကျြမြားအောငျမွငျမညျ။ အလုပျမရှိသူ အလုပျရခွငျး၊ အလုပျရှိသူတိုးတကျခွငျး ကွုံမညျ။ လကျဝယျ စုဆောငျးထားသော ငှကွေေးမြား အစု လိုကျသုံးစှဲရခွငျး ကွုံမညျ။ ထိုသုံးစှဲမှုကလဲ ကိုယျ့အတှကျ အခညျြးနှီး မဖွဈနိုငျပါ။တဈခုသတိထားရမှာက တနင်ျလာနေ့ မှေးသော သူမြားနှငျ့ ပူး တှဲလုပျခွငျးမှ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈရမညျ။ လူကွီးသူမတှရေဲ့ ဂရုဏာကို ရရှိတတျပါတယျ။
စကျ ကားယန်တရားနဲ့ လုပျကိုငျနရေသူတှေ ဖွေးဖွေးမှနျမှနျ လုပျပါ။ အလငျြလိုလေ ထိခိုကျမှုမြားလဆေိုတာ သိထားပါ။ ကနျြးမာရေးကတော့ ဒေါငျဒေါငျမွညျ ကောငျးနတေတျပါတယျ။ အခဈြရေး ကံခနေတေတျပါတယျ။ အိမျထောငျရေး မှာတော့ အိမျထောငျဘကျအပျေါ သံသယတှေ မြားနတောမြိုးရှိရငျ လြှော့ပါ။ ပညာရေးနယျပယျ ကောငျးမှနျနတေတျ ပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး 8/ 7/ 0
အထူးဟော - အခှငျ့အလမျးတှေ ရလာမဲ့ ကာလပါပဲ။
ယတွာ - နဂါးမောကျသီး ဘုရားကပျလှူပေးပါ
ဒီကာလအတှငျး သတိထားစရာ အခကျြတှေ မြားပါတယျ။ ဘာလုပျလုပျ ဆငျခွငျဉာဏျကို ဦးစားပေးပွီးမှ ဆုံး ဖွတျ စခေငျြပါတယျ။ နအေိမျဝနျး ကငျြတှငျ ရနျပှဲမြားရှိက ဝငျရောကျဖွနျဖွခွေငျး မပွုနှငျ့။ ဒဏျရာအနာတရ ဖွဈခွငျးနှငျ့ အမှု ဖွဈခွငျးမြားပငျ ကွုံနိုငျသညျ။ အသငျးအဖှဲ့ကိစ်စမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ အငွငျးပှားခွငျးရှောငျပါ။ ပဋိပက်ခအကွီးစား ဖွဈတတျသညျ။ လကျစှပျ၊ နာရီ၊ ဆှဲကွိုးအစ ရှိသညျ့ ကိုယျနှငျ့မကှာဝတျသော ပစ်စညျးမြား ပြောကျ ရှတတျ﻿သညျ။
ငှကွေေးအပေးအယူကိစ်စမှနျသမြှ သတိနှငျ့ဆောငျရှကျပါ။ ကုနျပစ်စညျးမြား ဝယျယူသညျကအစ အကွှေး မဝယျ ပါနှငျ့။ ပွဿနာမြား ဖွဈလာတတျသညျ။ အသကျအရှယျကွီးရငျ့သောဆှမြေိုးသားခငျြး မြားရောဂါ ကုသရနျ နအေိမျ တှငျ လကျမခံရ။ ရောဂါဝဒေနာကွီးမား၍ အသကျဘေးအထိပငျ ကွုံနိုငျ သညျ။ ထီဝါသနာပါသူမြားလဲ ထီကံစမျးလို့ ကောငျးပါတယျ။
ဘာလုပျလုပျ ခန်ဓာကိုယျကို ထိခိုကျအောငျ မလုပျမိပါစနေဲ့။ အနားယူခြိနျကို သတျမှတျပွီးနားပါ။ ကနျြးမာရေး အရမျးညံ့နတောမြိုး မတှပေ့ါဘူး။ အခဈြရေးမှာတော့ ခဈြရသူက မိမိကို အခဈြတှေ ပိုလာပါလိမျ့မယျ။ အိမျထောငျရေး သာယာပြျောရှငျ ရလိမျ့မယျ။ ပညာရေးကတော့ စီးပှားရေးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ပညာတှေ ရလိမျ့မယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး 3/6/9
အထူးဟော - အလုပျမြားနမေညျ။
ယတွာ - နီးစပျရာစတေီရဲ့ မှေးနံထောငျ့မှာ ဘုရားရှငျအား ရသေပ်ပယျပါ။
လူမြိုးကှဲအကြိုး ပေးမညျ။ စာရှကျ စာတမျးကိစ်စ၊ စကားပွောဆိုမှုမြား အထူးအောငျမွငျမညျ။ ယခု ကာလမြားအတှငျး ကိုယျ့ကိစ်စကို ဘေးဖယျထား၍ သူတဈပါးကိစ်စမြားကို ကွားဝငျကူညီ ဆောငျရှကျပေး ရငျး အထငျမှား၊ အမွငျမှား၊ စှပျစှဲခံရခွငျးမြား ရှိနမေညျ။ မိမိ၏စာနာ သနားမှု၊ အားနာတတျမှု၊ ယုံလှယျမှုတို့ကို ခုတုံးလုပျအသုံးခြ၍ ကိုယျကြိုးရှာသူမြား၊ ဒုက်ခပေးသောသူမြား ကွုံ တှနေ့ရေမညျ။
အလှူမင်ျဂလာ ကိစ်စမြားလညျး ပါဝငျပတျသကျနေ ရမညျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စတှမှော ဆုံးဖွတျရခကျတဲ့ အခွအေနမြေိုးတှေ ကွုံတှလေ့ာ ရတတျပါတယျ။ မိသားစုထဲက ဆှမြေိုးတှထေဲက နိုငျငံခွားခရီးစီစဉျနသေူမြား အထူးအောငျမွငျ အဆငျပွသှေား ပါလိမျ့မညျ။ ကနျြးမာရေး မှာတော့ အနညျးငယျ အားနညျးပါတယျ။ အဓိကတော့ သှေးပေါငျကြ တာမြိုးဖွဈလှယျပါတယျ။ မိနျးကလေးတှေ ဓမ်မတာနဲ့ ပကျသကျသောရောဂါတှေ ရလှယျပါတယျ။
ဒီကာလမှာ တဈခု သတိပေးခငျြတာက စကား ပွောနညျးတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ အသံကွောငျ့ ဖားသဆေိုတာမြိုး ဖွဈတတျလို့ပါ။ အဆငျမပွခေကျခဲနတေဲ့ ဆရာသမားတှကေို ကူညီထောကျပံ့ခှငျ့တှေ ရလာတတျပါတယျ။ အခဈြရေးမှာတော့ သညျးခံနိုငျမှ ပွလေညျပါလိမျ့ မယျ။ အိမျထောငျရေး အညံ့အဆိုးတှကေို ရငျဆိုငျရတတျပါတယျ။ ပညာရေးကံ အထူးကောငျး နမေညျ။ စာမေးပှဲတှေ၊ အငျတာဗြူးတှေ ရလဒျကောငျး နတေတျပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး 2/ 5/ 9
အထူးဟော - စိတျပငျပနျးရမညျ။
ယတွာ - သပွပေနျး ဘုရားကပျလှူ ဆုတောငျးပါ။
ဘေးပတျဝနျးကငျြက မနာလိုဖွဈလောကျအောငျကိုပဲ လုပျငနျးတှေ အောငျမွငျပွီး ငှမြေား ရှငျလာရတတျ ပါတယျ။ အောငျမွငျမှုကွီးတှေ၊ ဝမျးသာစရာကွီးတှေ ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။ ရာထူးတိုး၊ ဝငျငှတေိုး၊ ထီပေါကျ၊ မဲပေါကျ၊ ဆုရသလိုမြိုး ကံထူးတတျပါတယျ။ ဦးတညျခကျြသဈနှငျ့ ဆောငျရှကျခွငျးတို့မှ အကြိုးဆကျကောငျးမြား ဖွဈပျေါလာမညျ။ ကိုယျစှမျးကိုယျစကို အသုံးခြ၍ ဘဝတိုးတတျမညျ။
လုပျငနျးခှငျမှသူမြား ရာထူးတိုးတတျမညျ။ ရပျဝေးက ဝမျးသာစရာ ဧညျ့သညျမြား ရောကျရှိလာတတျပါသညျ။ အဖိုးတနျပစ်စညျးမြား အရောငျး အဝယျကိစ်စမြား အဆငျပွေ အောငျမွငျမညျ။ နရော ထိုငျခငျးကိစ်စ၊ အဆောကျအအုံ ကိစ်စတှေ၊ ဆုံးဖွတျရခကျနတေဲ့ အခွအေနေ မြိုးတှလေညျး ကွုံတှနေ့ရေတတျပါသညျ။ အောကျလကျငယျသားမြား အတှကျ ဝမျးမွောကျကွညျနူး ရလိမျ့မညျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ လူငယျတှလေူလတျပိုငျး တှအေညံ့နညျးပါတယျ။ အသကျအရှယျကွီးရငျ့သူတှနောမကနျြးဖွဈ ရငျတော့ ခကျြခငျြးသခြောကုသမှုခံယူပါ။
အခဈြရေးမှာတော့ အညံ့အဆိုး နညျးပမေဲ့ ကိုယျ့အလုပျနဲ့ကို သူကိုလဲ ဂရုမစိုကျနိုငျဖွဈရတတျပါတယျ။ ခဈြသူ မရှိသေးသူမြားကတော့ အခဈြသဈနှငျ့ ဆုံစညျးခှငျ့ ရရှိ၍ သာယာပြျော ရှငျခမျြးမွေ့ ရပမေညျ။ အိမျထောငျရေးကတော့ အဆငျပွေ သာယာပါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးမှာတော့ ကွိုးစားမှုတှကေ အရာ မရောကျသလို ဖွဈနမေညျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး 1/ 3/ 7
ယတွာ - ထိုးမုနျ့ ဘုရားကပျလှူပွီး လိုရာဆုတောငျးပါ။
အလောတကွီး ဆုံးဖွတျမိခွငျးမြားကွောငျ့ အခကျအခဲမြား ကွုံတှရေ့နိုငျပါသညျ။ အပေါငျးအသငျး၊ မိတျသင်ျဂဟကွောငျ့ အလုပျအကွံအစညျမြား နှောငျ့နှေးနမေညျ။ တှဲဖကျဆောငျရှကျသော သူမြား၏ မရိုးသားသောကွောငျ့ ပွဿနာမြား ဖွရှေငျးပေးရတတျသညျ။ အိမျရှိ အသကျအရှယျကွီးသူမြား၏ ကနျြးမာရေးအညံ့မြား ကွုံမညျ။ ညာခွေ၊ ညာလကျတှငျ မတျောတဆ ထိခိုကျမှုမြား ဖွဈစရေတတျပါသညျ။
အရပျဝေးနှငျ့ ဆကျဆံဆောငျရှကျသော ကိစ်စမြားမှ ထူးခွားသော အောငျမွငျမှုမြား ဖွဈပျေါလာမညျ။ တဈရပျတဈကြေးက ဆှမြေိုးမိတျဆှတေဈဦးရဲ့ အသညျး အသနျဖွဈနတေဲ့ သတငျးမြားလညျး ကွားသိရတတျပါတယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စတှမှောလညျး ထူးထူး ခြှနျခြှနျ အောငျမွငျမှု တှလေညျး ကွုံတှနေ့ရေတတျပါတယျ။
ရနျအပွိုငျအဆိုငျမြား၊ မနာလိုသူမြားကို ကြျောလှားပွီး အလိုရှိရာသို့ ဆောငျရှကျအဆငျပွမေညျ။ ကနျြးမာရေးကတော့ အလှနျကောငျးပါတယျ။ စားဝငျအိပျပြျောပွီးနသော ထိုငျသာရှိပါလိမျ့မယျ။ အခဈြရေးကတော့ ပနျးခငျးသောလမျး မဟုတျပါဘူး။ အိမျထောငျရေး ကိစ်စတှမှောတော့ မိမိရဲ့ သဘောထားကွီးမှုကွောငျ့ အဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ ရပျဝေးသှားပွီး ပညာရှာလို့ ကောငျးတဲ့ ကာလပါပဲ။
အကြိုးပေးဂဏနျး 3/ 4/ 6
အထူးဟော - စိတျခမျြးသာစရာတှပေဲ ကွုံနရေမညျ။
ယတွာ - ခငျပှနျးကွီးဆယျပါးကို ရညျမှနျးပွီး ဘုရားမှာ ဆှမျးကပျပါ။
၇ ရကျ သားသမီးအပေါငျး ရနျသူမြိုးငါးပါးဘေးနှငျ့ ကပျ ၃ ပါးဘေးမှ ကငျးဝေးနိုငျကွပါစေ။
ဆရာငြိမ်း၏ 22. July. 21 မှ 28. July. 21 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
22. July .2021 မှ 28. July. 2021 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း
ဒီကာလအတွင်းမှာတော့ အနည်းငယ် စိတ်ပူပင်စရာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ကြီးကြီးမားမား ကိစ္စတွေဘာမှ ကြံစည်၊ စိတ်ကူး၊ လုပ်ကိုင်လို့ မရသေးပါဘူး။ လူငယ်များမိဘတွေနဲ့ အတိုက်အခံ မလုပ်မိပါစေနဲ့။ ကိုယ့်ကိစ္စထက် သူတစ်ပါးရဲ့ကိစ္စတွေ ပိုပြီးရှုတ်ထွေး နေရတတ်ပါသည်။ အပူလောင်တာ၊ ဓါတ်လိုက်တာ၊ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာ သူခိုးအခိုးခံရတာတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ပစ္စည်းအဝယ်အရောင်း ကိစ္စတစ်ခု လွဲချော်သွား တတ်ပါသည်။
မိတ်ဆွေရင်း၊ လူရင်းများထဲက နာရေးကိစ္စများအထိ ကြုံတွေ့နေရ တတ်ပါသည်။ ကတိပေးမှားတာ၊ စာချုပ်မှားနေတာတွေ ဖြစ်စေရတတ်ပါသည်။ အမှန်တော့ ဒီကာလအတွင်းမှာ ပုံမှန်အတိုင်းသာ လည်ပတ် လုပ်ကိုင်ပါ။ အသစ်တစ်ခုခု စတာမျိုးတွေ၊ အပြောင်းအလဲလုပ်တာမျိုးတွေက သေချင်တဲ့ကျား တော ပြောင်း ဖြစ်ရတတ် ပါတယ်။ အွန်လိုင်းက ပစ္စည်းမှာတာမျိုးတွေ၊ ရပ်ဝေးကို ပစ္စည်းပို့တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာ လမ်းခရီးမှာ ပစ္စည်းဆုံးရှုံးပျက်စီး တာမျိုးတွေ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။
အချစ်ခရီးလမ်းဖြောင့်ဖြူးတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့အခက်အခဲ တွေကို အတူတူ ရင်ဆိုင်ပါ။ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အိမ်ထောင်ဘက်က ဝင်ငွေတိုးတာမျိုး၊ စီးပွားအဆင်ပြေတာမျိုး ကြုံရအတွက် စိတ်ချမ်းသာရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးအတွက် ဆရာကောင်းတွေနဲ့ မချိတ်ဆက်မိသလိုဖြစ်နေရ တတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 2/ 1/ 4
အထူးဟော - ကံအားနည်းနေပါလိမ့်မယ်။
ယတြာ - ရေခွက်တစ်ခွက် ရဟန်းတစ်ပါးကို လှူပေးပါ
ကံကြမ္မာက ဒီအပတ်ထဲ အကောင်းအဆိုးမျှနေတာ တွေ့ရတယ်။ ဘယ်အရာမှ အဆိုးဆုံးမဖြစ်သလို၊ ဘယ် အရာမှလဲ ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက် မဖြစ်ချိန်ပါပဲ။ အမှုအခင်း ပြဿနာများ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည်။ အလုပ်အကိုင် ကိစ္စရပ်များကို အကြောင်းပြု၍ ရုံးရောက်၊ ဂါတ်ရောက်ကြုံနိုင်သည်။ အနောက်တောင်အရပ်သို့ ခရီးသွားစဉ် အန္တရာယ် ကြုံနိုင်သည်။ မျက်စိတွင် မတော်တဆ ထိခိုက်မှု သတိရှိပါ။
အမျိုးသားများ အသွားအလာ၊ အနေအထိုင် မဆင်ခြင်က လိင်ကိစ္စ ဖြေရှင်းရခြင်း၊ စွပ်စွဲခံရခြင်းများ ကြုံနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးကောင်းပေမဲ့ ဆေးထိုး၊ ဆေး သောက်မှားယွင်း ခြင်း ဂရုစိုက်ရမည်။ ရောင်းဝယ်ခွင့်မပြုသော ဆေးဝါးတို့ကို လက်ဝယ်မထားရှိရ။ အန္တရာယ်ကြီးမားလိမ့်မည်။ ငွေနောက်မလိုက်ဖို့အထူးမှာချင်ပါ တယ်။ ငွေကြေးအလျင်လိုနေလို့ လောင်းကစားမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုက်တာက အရှုံးများသွားနိုင်ပါတယ်။
သူများတွေက ငါ့အလုပ်ကို ခဏအစား ထိုးလုပ်ပေးပါဆိုရင် သတိထားပါ။ ပြဿနာက အဲဒါက စပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခြားသူများမှားနေရင်တောင်မှ မိမိကပုံကြီးချဲ့ပြီး ပြဿနာမရှာလိုက်ပါနဲ့။ အဖြေပဲရှာ ပေး လိုက်ပါ။ အသားအရေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဝက်ခြံပုန်းတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကံ မကောင်းသေးတဲ့ ကာလပါပဲ။ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ လက်တွဲညီညီနဲ့ ရှေ့ဆက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးမှာတော့ စာတွေကိုအပေါ်ယံလောက်ပဲ နားလည်မဲ့ ကာလပါပဲ။
အကျိုးပေးဂဏန်း 1/ 4/ 7
ယတြာ - ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ ဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။
ရပ်တန့်ထားသော ပညာရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ ဆိုင်းငံ့ထားသောခရီးကိစ္စ အဆင်ပြေမည်။ လူမျိုးကွဲ အကျိုး ပေးမည်။ အရပ်ဝေးနှင့် ဆက်စပ်သောအလုပ်မှ ထူးခြားသော အကျိုးရရှိမည်။ လက်ကားစီးပွား ရေးအလုပ်များ အမြတ်အစွန်းကောင်း ရရှိမည်။ မြောက်အရပ်သို့ခရီးသွား စဉ် ကောင်းသောအကျိုးပေါ်ထွန်းမည်။ အိမ်အသစ်ဆောက် ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အိမ်အပြောင်းအရွှေ့များ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ နေရာထိုင်ခင်း ကိစ္စများ ပြောဆိုဆောင် ရွက် အောင်မြင်မည်။
အကြံအစည်၊ ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်မည်။ အလုပ်မရှိသူ အလုပ်ရခြင်း၊ အလုပ်ရှိသူတိုးတက်ခြင်း ကြုံမည်။ လက်ဝယ်စုဆောင်းထားသောငွေကြေးများ အစု လိုက်သုံးစွဲရခြင်း ကြုံမည်။ ထိုသုံးစွဲမှုကလဲ ကိုယ့်အတွက် အချည်းနှီးမဖြစ်နိုင်ပါ။တစ်ခုသတိထား ရမှာကတနင်္လာနေ့ မွေးသော သူများနှင့် ပူး တွဲလုပ်ခြင်းမှ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရမည်။ လူကြီးသူမတွေရဲ့ ဂရုဏာကိုရရှိတတ်ပါတယ်။
စက် ကားယန္တရားနဲ့ လုပ်ကိုင်နေရသူတွေ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်လုပ်ပါ။ အလျင်လိုလေ ထိခိုက်မှုများလေဆိုတာ သိထားပါ။ ကျန်းမာရေးကတော့ ဒေါင်ဒေါင်မြည်ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေး ကံခေနေတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး မှာတော့ အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ် သံသယတွေ များနေတာမျိုးရှိရင် လျှော့ပါ။ ပညာရေးနယ်ပယ် ကောင်းမွန်နေတတ် ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 8/ 7/ 0
အထူးဟော - အခွင့်အလမ်းတွေ ရလာမဲ့ကာလပါပဲ။
ယတြာ - နဂါးမောက်သီး ဘုရားကပ်လှူပေးပါ
ဒီကာလအတွင်း သတိထားစရာ အချက်တွေ များပါတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် ဆင်ခြင်ဉာဏ်ကို ဦးစားပေးပြီးမှ ဆုံး ဖြတ် စေချင်ပါတယ်။ နေအိမ်ဝန်း ကျင်တွင် ရန်ပွဲများရှိက ဝင်ရောက်ဖြန်ဖြေခြင်း မပြုနှင့်။ ဒဏ်ရာအနာတရ ဖြစ်ခြင်းနှင့် အမှု ဖြစ်ခြင်းများပင် ကြုံနိုင်သည်။ အသင်းအဖွဲ့ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားခြင်းရှောင်ပါ။ ပဋိပက္ခအကြီးစား ဖြစ်တတ်သည်။ လက်စွပ်၊ နာရီ၊ ဆွဲကြိုးအစ ရှိသည့် ကိုယ်နှင့်မကွာဝတ်သောပစ္စည်းများ ပျောက် ရှတတ်﻿သည်။
ငွေကြေးအပေးအယူကိစ္စမှန်သမျှ သတိနှင့်ဆောင်ရွက်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူသည်ကအစ အကြွေး မဝယ် ပါနှင့်။ ပြဿနာများ ဖြစ်လာတတ်သည်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သောဆွေမျိုးသားချင်း များရောဂါ ကုသရန် နေအိမ် တွင် လက်မခံရ။ ရောဂါဝေဒနာကြီးမား၍ အသက်ဘေးအထိပင်ကြုံနိုင် သည်။ ထီဝါသနာပါသူများလဲ ထီကံစမ်းလို့ကောင်းပါတယ်။
ဘာလုပ်လုပ် ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်အောင် မလုပ်မိပါစေနဲ့။ အနားယူချိန်ကို သတ်မှတ်ပြီးနားပါ။ ကျန်းမာရေး အရမ်းညံ့နေတာမျိုး မတွေ့ပါဘူး။ အချစ်ရေးမှာတော့ ချစ်ရသူက မိမိကို အချစ်တွေ ပိုလာပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေး သာယာပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကတော့စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပညာ တွေရလိမ့်မယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 3/6/9
အထူးဟော - အလုပ်များနေမည်။
ယတြာ - နီးစပ်ရာစေတီရဲ့ မွေးနံထောင့်မှာ ဘုရားရှင်အား ရေသပ္ပယ်ပါ။
လူမျိုးကွဲအကျိုး ပေးမည်။ စာရွက် စာတမ်းကိစ္စ၊ စကားပြောဆိုမှုများ အထူးအောင်မြင်မည်။ ယခုကာလများအတွင်း ကိုယ့်ကိစ္စကို ဘေးဖယ်ထား၍ သူတစ်ပါးကိစ္စများကို ကြားဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေး ရင်း အထင်မှား၊ အမြင်မှား၊ စွပ်စွဲခံရခြင်းများ ရှိနေမည်။ မိမိ၏စာနာ သနားမှု၊ အားနာတတ်မှု၊ ယုံလွယ်မှုတို့ကို ခုတုံးလုပ်အသုံးချ၍ ကိုယ်ကျိုးရှာသူများ၊ ဒုက္ခပေးသောသူများ ကြုံ တွေ့နေရမည်။
အလှူမင်္ဂလာကိစ္စများလည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေ ရမည်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာ ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေ ကြုံတွေ့လာ ရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုထဲက ဆွေမျိုးတွေထဲက နိုင်ငံခြားခရီးစီစဉ်နေသူများ အထူးအောင်မြင် အဆင်ပြေသွား ပါလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေး မှာတော့ အနည်းငယ် အားနည်းပါတယ်။ အဓိကတော့ သွေးပေါင်ကျ တာမျိုးဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ဓမ္မတာနဲ့ ပက်သက်သောရောဂါတွေ ရလွယ်ပါတယ်။
ဒီကာလမှာတစ်ခု သတိပေးချင်တာက စကား ပြောနည်းတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ အသံကြောင့် ဖားသေဆိုတာမျိုး ဖြစ်တတ်လို့ပါ။ အဆင်မပြေခက်ခဲနေတဲ့ ဆရာသမားတွေကိုကူ ညီထောက်ပံ့ခွင့်တွေ ရလာတတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာတော့ သည်းခံနိုင်မှ ပြေလည်ပါလိမ့် မယ်။ အိမ်ထောင်ရေး အညံ့အဆိုးတွေကို ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကံ အထူးကောင်း နေမည်။ စာမေးပွဲတွေ၊ အင်တာဗျူးတွေ ရလဒ်ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 2/ 5/ 9
အထူးဟော - စိတ်ပင်ပန်းရမည်။
ယတြာ - သပြေပန်း ဘုရားကပ်လှူ ဆုတောင်းပါ။
ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က မနာလိုဖြစ်လောက်အောင်ကိုပဲ လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်ပြီး ငွေများ ရွှင်လာရတတ် ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုကြီးတွေ၊ ဝမ်းသာစရာကြီးတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ရာထူးတိုး၊ ဝင်ငွေတိုး၊ ထီပေါက်၊ မဲပေါက်၊ ဆုရသလိုမျိုး ကံထူးတတ်ပါတယ်။ ဦးတည်ချက်သစ်နှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့မှ အကျိုးဆက်ကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စကို အသုံးချ၍ ဘဝတိုးတတ်မည်။
လုပ်ငန်းခွင်မှသူများ ရာထူးတိုးတတ်မည်။ ရပ်ဝေးက ဝမ်းသာစရာ ဧည့်သည်များ ရောက်ရှိလာတတ်ပါသည်။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ အရောင်း အဝယ်ကိစ္စများ အဆင်ပြေ အောင်မြင်မည်။ နေရာ ထိုင်ခင်းကိစ္စ၊ အဆောက်အအုံ ကိစ္စတွေ၊ ဆုံးဖြတ်ရခက်နေတဲ့ အခြေအနေ မျိုးတွေလည်း ကြုံတွေ့နေရတတ်ပါသည်။ အောက်လက်ငယ်သားများ အတွက် ဝမ်းမြောက်ကြည်နူး ရလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေးကတော့ လူငယ်တွေလူလတ်ပိုင်း တွေအညံ့နည်းပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေနာမကျန်းဖြစ် ရင်တော့ ချက်ချင်းသေချာကုသမှုခံယူပါ။
အချစ်ရေးမှာတော့ အညံ့အဆိုးနည်းပေမဲ့ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကို သူကိုလဲ ဂရုမစိုက်နိုင်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူ မရှိသေးသူများကတော့ အချစ်သစ်နှင့် ဆုံစည်းခွင့် ရရှိ၍ သာယာပျော် ရွှင်ချမ်းမြေ့ ရပေမည်။ အိမ်ထောင်ရေးကတော့ အဆင်ပြေ သာယာပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးမှာတော့ ကြိုးစားမှုတွေက အရာ မရောက်သလို ဖြစ်နေမည်။
အကျိုးပေးဂဏန်း 1/ 3/ 7
ယတြာ - ထိုးမုန့်ဘုရားကပ်လှူပြီး လိုရာဆုတောင်းပါ။
အလောတကြီး ဆုံးဖြတ်မိခြင်းများကြောင့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ အပေါင်းအသင်း၊ မိတ်သင်္ဂဟကြောင့် အလုပ်အကြံအစည်များ နှောင့်နှေးနေမည်။တွဲဖက်ဆောင်ရွက်သောသူများ၏ မရိုးသားသောကြောင့် ပြဿနာများ ဖြေရှင်းပေးရတတ်သည်။ အိမ်ရှိ အသက်အရွယ်ကြီးသူများ၏ ကျန်းမာရေးအညံ့များ ကြုံမည်။ ညာခြေ၊ ညာလက်တွင် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်စေရတတ်ပါသည်။
အရပ်ဝေးနှင့် ဆက်ဆံဆောင်ရွက်သော ကိစ္စများမှ ထူးခြားသော အောင်မြင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။ တစ်ရပ်တစ်ကျေးက ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ အသည်း အသန်ဖြစ်နေတဲ့ သတင်းများလည်း ကြားသိရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စတွေမှာလည်း ထူးထူး ချွန်ချွန် အောင်မြင်မှု တွေလည်း ကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်။
ရန်အပြိုင်အဆိုင်များ၊ မနာလိုသူများကို ကျော်လွှားပြီး အလိုရှိရာသို့ ဆောင်ရွက်အဆင်ပြေမည်။ ကျန်းမာရေးကတော့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ စားဝင်အိပ်ပျော်ပြီးနေသာ ထိုင်သာရှိပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးကတော့ ပန်းခင်းသောလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စတွေမှာတော့ မိမိရဲ့ သဘောထားကြီးမှုကြောင့် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ရပ်ဝေးသွားပြီး ပညာရှာလို့ ကောင်းတဲ့ကာလပါပဲ။
အကျိုးပေးဂဏန်း 3/ 4/ 6
အထူးဟော - စိတ်ချမ်းသာစရာတွေပဲ ကြုံနေရမည်။
ယတြာ - ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးကို ရည်မှန်းပြီး ဘုရားမှာ ဆွမ်းကပ်ပါ။
၇ ရက် သားသမီးအပေါင်း ရန်သူမျိုးငါးပါးဘေးနှင့် ကပ် ၃ ပါးဘေးမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။